Nei iPhone Yangu Inoenda Yakananga KuVoicemail? Heino Kugadzirisa! - Iphone
iphone skrini isina chinhu haina kudaira
iphone backup kumacomputer isiri kushanda
inoratidza mapatya ako murazvo ari kufunga nezvako
Nei iPhone Yangu Inoenda Yakananga KuVoicemail? Heino Kugadzirisa!
Shamwari dzako dziri kuyedza kukusheedza, asi hadzigone kupfuura. MaPhones avo anorira kana uchinge wafona ivo , saka nei yako isiri? Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone ichienda yakananga kuvoicemail kana mumwe munhu achisheedza uye kugadzirisa dambudziko racho zvachose.
Nei iPhone Yangu Inoenda Yakananga KuVoicemail Kana Mumwe Munhu Achidaidza?
Yako iPhone inoenda yakananga ku voicemail nekuti yako iPhone haina sevhisi, Usakanganise yakavhurwa, kana iyo Yekutakura Zvirongwa marongero inowanikwa. Isu tinokubatsira iwe kuziva uye kugadzirisa iro chairo dambudziko pazasi.
Zvikonzero zvinomwe nei maPhones Achienda Akananga kuVoicemail
Pane zvikonzero zvitatu zvakakosha nei maPhones achienda kuvoicemail, uye anenge munhu wese atoziva yekutanga. Ndiri kuda kubheja mafoni ako ari kuenda akananga kuvoicemail nekuda kwechikonzero # 2 kana # 3.
zvinorevei kana mukomana achitsvoda huma yako
Kwete Service / Ndege Mode
Kana yako iPhone iri kure kure kuti ubatanidze nhare dzesero, kana kana ichibviswa kubva kunze kwenyika neAirplane Mode, mafoni ese anoenda akananga kuvoicemail nekuti yako iPhone haina kubatana kune cellular network.
Kana yako iPhone yakavharwa (iyo skrini yakadzimwa), Usakanganise inonyaradza zvese zvinouya zvinoda, mameseji ezaziso, uye kunyevera pane yako iPhone. Kusiyana nemamiriro akanyarara, Usakanganise anotumira mafoni anouya akananga kuvoicemail.
Tarisa mukona yekurudyi-kona ye iPhone yako, kuruboshwe kuruboshwe rwechiratidzo chebhatiri. Kana iwe ukaona mwedzi wecrescent, Usakanganise yakavhurwa.
Nzira yekukurumidza kudzima Usakanganise inowanikwa muDirect Center. Kuti uvhure Control Center, shandisa munwe wako kuti utsvage kumusoro kubva pasi pechiratidziro che iPhone yako. Tarisa iyo yekrescent mwedzi icon, uye wobva warova nemunwe wako kudzima Usakanganise.
Iwe unogona zvakare kudzima Usakanganise mune iyo Zvirongwa app nekuenda ku Zvirongwa -> Usakanganise . Tinya chinja kurudyi kwe Usakanganisa kudzima Usakanganise.
Sei Usina Kuvhiringidza Kutendeuka Kubva Pakutanga?
Vhura iyo Zvirongwa app uye tora pa Usakanganisa . Ndizvo Yakarongwa kubatidza? Kana zvirizvo, yako iPhone inozongo shandura Usakanganise kuvhura uye kudzima kana iwe uchizorara.
Chinhu chitsva chakaunzwa neIOS 11 inonzi Usakanganise Pari Kutyaira inogona kungoerekana yangoitika kana yako iPhone ichiona paunenge wakakwira mota.
Kuti udzime Usakanganise Paunenge Uchityaira, kutanga iwe uchafanirwa kuwedzera Usakanganise Uchiri Kutyaira kuControl Center nekuenda ku Zvirongwa -> Kudzora Center -> Gadzirisa Kudzora uye tora iyo green plus sign kuruboshwe kune Usakanganise Uchiri Kutyaira.
Tevere, swipe kumusoro kubva pasi pechiso kuvhura Control Center uye tora iyo Usavhiringidze Paunenge Uchityaira icon.
apple news app isiri kushanda
Vamwe vaverengi vakashuma mhinduro nyowani yakaonekwa mune yazvino vhezheni yeIOS: Chinja Zivisa Mafona kuna Nguva Dzose. Enda ku Zvirongwa -> Runhare -> Zivisa Mafoni , pombi Nguva dzose , uye edza.
Kana mafoni ako achienda ku voicemail, ungangoda kumutsiridza marongero anotakura pane yako iPhone. Marongero anotakura ndiwo anotendera yako iPhone kuti ibatanidze kune yako yekutakura isina waya network.
Kana zvigadziriso zvevatakuri ve iPhone zvave zvechinyakare, zvinogona kunetsekana nekubatanidza netiweki yako yekutakura, izvo zvinogona kukonzeresa mafoni anouya kuti angonanga kuvoicemail yako.
Kuti utarise Ekutakura Zvirongwa Zvidzidzise , vhura iyo Zvirongwa app uye tap General -> About . Kana marongero ekugadzirisa anotakura aripo, yambiro ichaonekwa pane yako iPhone inoratidza inoti ' Ekutakura Zvirongwa Zvidzidzise “. Kana yambiro iyi ikaonekwa pane yako iPhone, tinya Kwidziridza .
Dzima Runyararo Rusingazivikanwe Vanofona
Kunyarara Vasingazive Vanodaidza ichatumira mafoni kubva kunhamba dzisingazivikanwe zvakananga kuvoicemail. Kufona kucharatidza mu Munguva pfupi yapfuura tab muFoni kunyangwe ichienda yakananga kuvoicemail.
Vhura Zvirongwa uye tapira Runhare . Dzima switch iripedyo ne Kunyarara Kusingazivikanwe Vanofona kudzima mamiriro aya.
Bata Mutakuri Wako
Iko kune mukana wekuti iwe ungangoda kubata wako sero anotakura nezve nyaya ine sevhisi yekupotsa kana kudonhedza mafoni. Kana zvikave zvinowanzoitika zvisingaenzaniswi nechero matanho ekugadzirisa zvinhu muchinyorwa chino, ungangoda kubata mupi wako kuti uone kana paine chero nyaya dzinozivikanwa kana kana paine shongedzo yekuvandudza inofanirwa kuitwa pane avo magumo.
Wireless Mutakuri Kutsigira Bata Nhamba
Inguva Yekuchinjisa Wireless Vatakuri?
Kana iwe uchiguta nematambudziko anogara aripo neako asina waya anotakura, ungangoda kufunga nezvekuchinja. Iwe unowanzo chengetedza mari yakawanda paunoita! Tarisa UpPhone chishandiso ku enzanisa zvirongwa zvefoni kubva kune ese anotakura waya muUnited States.
iphone mune yekudzoreredza modhi haizodzore
IPhone yako iri kurira zvakare uye mafoni ako haasi kuenda akananga kuvoicemail. Usakanganise chinhu chinouya chinobatsira kana iwe wakarara, asi zvinogona kukonzeresa zvakanyanya kutema musoro kana iwe usingazive kuishandisa. Sevha shamwari dzako uye mhuri zvakafanana nemusoro nekugovana ichi chinyorwa pasocial media kuti vagone zvakare kudzidza kuti nei yavo iPhone ichienda yakananga voicemail!